तिमी भ’र्जिन हो भन्ने प्रश्नमा चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीको जवाफ ! - dautarimedia.com
तिमी भ’र्जिन हो भन्ने प्रश्नमा चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीको जवाफ !
काठमाडौ । नेपाली चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीले आफ्नो गोप्य जीवनका बारेमापनि खुलासा गरेकी छिन् । मनोञ्जन दुनियाँका हसिला रसिला अन्र्तवार्ता लिने उत्सव रसाईलीसँगको कुराकानीमा उनले आफू क’न्याकु’मारी (भ’र्जिन) नरहेको खुलासा गरेकी हुन् ।
अविबाहित मोडल अञ्जली अधिकारीलाई उत्सव रसाईलीले आर यू भ’र्जिन भनेर प्रश्न गर्छन् । उनले बडो शानका साथ नो भन्छिन् । अञ्जलीले नो भन्दा उत्सव रसाईली अचम्ममा परेजस्तो गर्छन् । त्यसपछि उसले फेरी प्रष्ट पार्न खोज्छिन् । अहिलेका केटीहरु १३, १४ बर्षमा महिनावारी भइसकेपछि कहाँ भ’र्जिन बाँकी रहन्छन् र ? उनले भन्न खोजेको कुरा उत्सव रसाईलीले थप क्लियर गर्न सक्दैनन् कुरा यत्तिकैमा मोडिन्छ । दुबै जना हासोको फोहोरामा हराउछन् ।
अर्को अन्र्तवार्तामा उनले कुनैपनि चलचित्रमा तपाईलाई न्यू’ड सि’नको अफर आयो भने ? अञ्जलीले त्यहाँपनि आफूलाई चुकाएकी छिन् । उनले पहिले पैसा हेर्छु कति छ त्यसपछि ओके भन्दिन्छु । अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत त्यो क्लिप भाइरल छ । पैसा भए जेपनि गर्ने रहिछन् भनेर उनको तिव्र आलोचना गरिएको छ ।
सेलिब्रिटीहरु कहिलेकाहीँ अन्तरवार्तामा स–साना कुरामा चिप्लिँदा ट्रोलको शि’कार हुनुपर्छ । जस्तो कि अहिलेकी हटकेक मोडल अञ्जली अधिकारी धेरै पटक अन्तरवार्तालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भइरहेकी छिन् । एउटा यूट्यूव च्यानललाई दिएको अन्तरवार्तामा अञ्जलीलाई उनको ‘रिलेसनसिप स्टाटस’ बारे सोधिएको थियो । तर, जवाफमा अञ्जलीले ‘फेसबुक स्टाटस’को कुरा गर्न थालिन् ।
Previous: यी पुरानो नेपाली पैसा तपाइ सङ्ग छ भने कमेन्टमा सम्पर्क नम्बर छोड्नु होला?
Next: भर्खरै मोरङ बाट आयो यस्तो ड’रलाग्दो घ’ट्नाको, खबर : मनमा दया भए #RIP लेख्नु होला ।||